American Language Services - Peji Yemba
Hofisi yedu yekambani muLos Angeles,
yakavambwa 1985, muVaraidzo guta guru renyika.
Isu tinoshanda nemakambani epamusoro pasi rose pa "SPEED OF BUSINESS"
Yedu hofisi yeManhattan kumba kune nyika Bhizinesi,
Nzvimbo dzeMari neTsika.
Hofisi yedu muLas Vegas, iyo Gaming & Conference Capital yeUS,
uko nyika inouya kuzosangana & kutamba.
Isu tinodada kuve tiri muNyika yedu Capital
kutsigira Hurumende yeUS, Mauto, Nonprofit & Corporate world.
Hofisi yedu munzvimbo yeBay, imwe yemakuru uye
maguta akawanda ane cosmopolitan
America uye kumusha kuSilicon Valley.
Hofisi yedu yemuno muMiami, guta rine tsika dzakasiyana
uye Tourism & Business powerhouse.
Hofisi yedu yeChicago iri kumahombekombe kweLake Michigan,
kushandira iyo Windy City kweanopfuura makumi matatu emakore.
Mukati meTexas, hofisi yedu yemuno muHouston,
the Nation's 4th guta guru.
Danai: 800.951.5020, Email - translation@alsglobal.net
Dudziro Services Mitauro Yese uye Mafomati
Kuturikira Services Panguva imwe chete uye Inotevedzana
Zvinyorwa Zvekunyora Yakaunzwa muMafomati Ese
Dzidza Kuti AML-Global Inogona Kukubatsira Sei
AML-Global yanga ichibatanidza nyanzvi dzemitauro kuUS-based uye makambani ekunze kweanopfuura makore makumi matatu nemashanu. Chinangwa chedu nderekupa chikuva chepasi rose chekubatanidza vatengi kune vakanyanya, nyanzvi dzemitauro dzinowanikwa munyika.
Isu tiri kambani inoshuvira nekupa yakakura ruzivo rwevatengi.
Hunhu huri pakati pezvese zvatinoita.
Isu tiri ISO 9001 & 13485 Certified
Yese mafaera ekufambisa akachengeteka uye akavharidzirwa
Isu tiri kumberi kweTechnology
Yedu dhatabhesi yevashandi vemitauro sevhisi ndeimwe yeakakura muindasitiri
Zvikamu Zvikamu zveMitauro Yatinotaura neKunyora
Tatopinda mumwedzi wechina wegore, April ari pamusoro pedu. Mwedzi uno unozivikanwa kuve mwedzi wechirimo kuchamhembe…
Kurume, yakatumidzwa zita ramwari weRoma wehondo Mars, mwedzi wechitatu wegore. Zvisinei, hazvina kugara zvakadaro. Mukutanga…
Kukadzi ungava mwedzi mupfupi kwazvo pagore; zvisinei, haina kukosha zvishoma pane zvimwe. Nepo Ndira anoratidza kutendeuka kwe…
Ndira ndiwo kutanga kweGore Idzva. Goredzva Rakanaka Munhu wese! Gore Idzva rinomiririra imwe peji isina chinhu, mumwe mukana wekutanga zvakare. Chokwadi...
Rimwe gore rakapfuura Hongu, Zvita unogara uri mwedzi wekupedzisira kuvhara gore, zvisinei makore maviri apfuura akateverwa…
Ona MaBlog Edu
Ona Zvinyorwa Zvedu
Zadza fomu kurudyi kuti tibatsire bhizinesi rako kuzadzikisa zvido zvemutauro. Iwe unogashira mhinduro mukati memaminitsi mashoma, kwete mazuva
Kuti uwane mhinduro inokurumidza
Mamiriyoni eMashoko Anoshandurwa Gore negore
Maawa Anodudzirwa Gore Nega
# yeVadzidzisi Vakakodzera
North America Chiyero nehukuru
TINOBVUMA MAKADHI ESE MAKURU ECHIKWERETI
Key Indasitiri Zvinyorwa
Shanduro Dzakakosha dzeIndasitiri
PAMUSORO POTURIRIRO YEFONI (OPI)
Vhidhiyo Remote Interpreting (VRI) - Virtual Connect
Vadivelu Comedy Transcription Technology
KUTURIRIRA-GUTA ROSE MATURI
Las Vegas Vaturikiri
Los Angeles Vaturikiri
Vaturikiri veSan Diego
Vaturikiri veSan Jose
Vaturikiri veSan Francisco
Vaturikiri veWashington DC
MABASA EKUSHANDURA-200+ MUTAURO
Las Vegas Vashanduri
Vashanduri veSan Diego
Vashanduri veSan Francisco
Vashanduri veWashington DC
TRANCRIPTION BY CITY
Vaturikiri veMutauro Wemasaini wokuAmerica
Vashanduri Mutauro Wemasaini wokuAmerica
Kuturikira Mutauro weCantonese, Kuturikira, Masevhisi eKunyora
Dudziro yeMutauro weDari, Kuturikira, Kunyora Masevhisi
Kuturikira Mutauro weFarsi, Kuturikira, Kunyora Masevhisi
Shanduro yeFrench Canadian Mutauro, Kuturikira, Masevhisi eKunyora
Kuturikira Mutauro weFrench, Kuturikira, Masevhisi eKunyora
Kuturikira Mutauro wechiHebheru, Kuturikira, Masevhisi Akanyorwa
Kuturikira Mutauro weItalian, Kuturikira, Masevhisi eKunyora
Kuturikira Mutauro wechiJapani, Kuturikira, Kunyora Masevhisi
Kushandura Mutauro weKorea, Kuturikira, Masevhisi eKunyora
Mandarin, Shanduro yeMutauro weChinese, Kuturikira, Masevhisi ekunyora
Kuturikira Mutauro wePutukezi, Kuturikira, Kunyora Masevhisi
Kuturikira Mutauro weRussian, Kuturikira, Kunyora Sevhisi
Kuturikira Mutauro weTagalog, Kuturikira, Masevhisi eKunyora
Kuturikira Mutauro weTurkish, Kuturikira, Masevhisi eKunyora
Kushandura Mutauro weVietnamese, Kuturikira, Kunyora Masevhisi
RATIDZA ZVAKAWANDA RATIDZA ZVIDUKU
© Copyright 2022. Kodzero dzose dzakachengetedzwa. Inotarisirwa ne Yael Consulting